राष्ट्र बैंकले घटायो आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा, अब एक दिनमा कति कारोबार गर्न सकिन्छ ? - सिधा मिडिया
राष्ट्र बैंकले घटायो आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा, अब एक दिनमा कति कारोबार गर्न सकिन्छ ?
१८ फाल्गुन २०७८, बुधबार २०:२५ मा प्रकाशित
388 जनाले पढ़िसके
नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारको सीमा घटाएको छ । बुधबार एक सूचना जारी गर्दै केन्द्रिय बैंकले रेमिट्यान्सको आन्तरिक सीमा घटाएको जानकारी दिएको हो ।
यसअघि नेपालभर एक जना व्यक्तिले एक लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले अब भने प्रतिदिन एक जना व्यक्तिले २५ हजार रुपैयाँमात्रै पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था बुधबारदेखि नै कार्यान्वयनका लागि रेमिट्यान्स कम्पनीहलाई निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।